Shina mba hanitarana ny tsy fananana asa soa mba hamitahana ireo mpifindra monina ny tanàna - ny Reuters - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Shina mba hanitarana ny tsy fananana asa soa mba hamitahana ireo mpifindra monina ny tanàna - ny Reuters
BEIJING (Reuters) - ny Shinoa monisipaly ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy hanitatra ny tsy fananana asa soa ny mponina izay tsy voasoratra ara-panjakana ao an-toerana, any Shina, hoy ny alarobia teo, toy izany dismantles vato misakana ny-dehibe ny ezaka amin'ny fanamorana ny toe-piainana ho an'ny mpiasa mpifindra moninaAo shina amin'ny fanavaozana ny saina ny mpitondra naneho bebe kokoa ny fandeferana noho ny miadana ny fitomboana ara-toekarena, ara-pahasalamana ny fijerena asa ambaratonga toy ny top politika laharam-pahamehana sy ny toe-javatra manan-danja ho an'ny fahamarinan-toerana ara-tsosialy. Shinoa mpitarika efa nampanantena ny hamaha ny mafy eo amin'ny trano fonenana fisoratana anarana, fantatra amin'ny anarana hoe hukou, mba hiezaka mba hanafaingana ny-dehibe fiara. Izany dia hanampy ireo mpiasa mpifindra monina, izay tsy an-tanàn-dehibe hukou, ary dia tapaka, miaraka amin'ny fianakaviany, amin'ny fidirana amin'ny fampianarana ary ny fiahiana ara-tsosialy any ivelany an-tranony tanàna.
Tsy ao an-toerana ny fisoratana anarana dia tokony tsy ho ampiasaina ho toy ny fototry ny fandavana ny tsy fananan'asa, ny Minisitry ny Olombelona Loharanon-karena sy ny Fiarovana ara-Tsosialy hoy, araka ny tranonkalan'ny governemanta.
Governemanta ao an-toerana dia tsy maintsy ihany koa ny manome maimaim-poana ny asa ny toro-hevitra sy ny asa-mitady asa, ary hamatsy vola ny asa fampandrosoana sy ny fahaiza-manao-trano, dia nanampy.
Shina dia mihena tsikelikely ao an-tokantrano ny fisoratana anarana amin'ny sisin-dàlana aza dia satria ny governemanta dia niady mafy mba hampifandanjana ny tanjona dia toy ny mandrisika ny olona an-tapitrisany maro ny tantsaha mba hifindra monina any amin'ny tanàna sy ny fisorohana ny fokontany mahantra sy tsy an'asa loza mamely ny hafa firenena andalam-pandrosoana. Tafiditra ao anatin'ireo fepetra ireo ny zanabola nanapaka tamin'ny taon-dasa. Ny toe-karenan'i shina noforonina mihoatra ny telo ambin'ny folo tapitrisa ny asa vaovao, outstripping ofisialy kendrena na dia eo aza ny miadana ny fitomboana ara-toekarena.
Ao shina amin'izao fotoana Izao Lalàna Rafitra